यूरोप अभिलेखागार - TipWho
लन्डन ट्याक्सी टिपिंग
लन्डन ट्याक्सी टिपिंग परिचय के तपाईं लन्डन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ? ट्याक्सी प्रयोग गरेर लन्डनको वरिपरि पुग्नको लागि आरामदायी र सुविधाजनक तरीका हुन सक्छ तपाईंको लन्डन होटेल, र एयरपोर्ट सम्म। तिनीहरू यति सुविधाजनक छन् कि लन्डनमा प्रत्येक दिन ,300,000००,००० भन्दा बढी ट्याक्सी सवारीहरू गरिन्छन्। यदि तपाईं ट्याक्सी लिइरहनुभएको छ भने, तपाईंले टिपिंग बुझ्नुपर्छ […]
आइसल्याण्ड टूर गाइडमा टिपिंग
आइसल्याण्डमा टिपिंग: टुर गाइड संस्करण परिचय आईसल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको लागि लोकप्रिय गन्तव्य हो, प्रत्येक वर्ष २ 2.3. लाख भन्दा बढी विदेशीहरू आउँछन्। पर्यटन को लागी वर्ष को व्यस्त समय गर्मी महिना जुन जुन देखि अगस्त को हो, तर आइसल्याण्ड को वर्ष को प्रस्ताव को धेरै छ। लोकप्रिय हाइलाइटहरू उत्तरी लाइटहरू, तातो स्प्रि [्गहरू […] हुन्।